Arrintii Uu Jose Mourinho Kasii Digayay Ee Ay Isku-maandhaafeen Gareth Southgate Oo Dhacday & Madax-xanuunka Special One Kusoo Kordhay - Gool24.Net
Arrintii Uu Jose Mourinho Kasii Digayay Ee Ay Isku-maandhaafeen Gareth Southgate Oo Dhacday & Madax-xanuunka Special One Kusoo Kordhay
Jose Mourinho ayaa hore ugagag digay tababaraha xulka qaranka England ee Gareth Southgate inuu dhaawac halis ugu jiro weeraryahanka Spurs ee Harry Kane, waxaanu u sheegay inuu u baahan yahay nasasho iyo in kulamada caalamiga ah ee aan muhiimadda badan lahayn la ciyaarsiiyo.
Harry Kane oo dhaawac soo gaadhay qaybtii dambe ee xili ciyaareedkii hore muddo dhawr bilood ah u jiifay ayaa waxa uu horyaalka kula bilowday qaab wanaagsan, laakiin macallinka reer Portugal ayaa dareemayay inuu mar kale halis ugu jiro haddii aanu helin nasasho badan.
Tababare Mourinho waxa uu toddobaad ka hor ka dalbaday Southgate in aanu Harry Kane ku darin kulamada toddobaadkan ee UEFA Nations League iyo ciyaartii ka horreysay ee saaxiibtinimo ee ay Wales ku garaaceen.
Gareth Southgate ayaan dhegaysanin codsiga Tottenham, waxaanu u yeedhay Kane oo jugo qaba, isla markaana ay kooxdu daaweyn u samaynaysay, laakiin isla markiiba waxa laacibkan haleelay dhaawac.
Harry Kane oo kursiga kaydka fadhiyey kulankii Khamiistii uu xulka England 3-0 kaga adkaaday Wales, ayaa waxa Jimcihii uu dhaawac kasoo gaadhay tababar ay ciyaartoydu samaynayeen, kaas oo aan la ogeyn muddada uu garoomada kaga maqnaan doono.
Gareth Southgate oo iska dhego tiray dhawaaqa Jose Mourinho ayaa waxa u qorshaysnayd in Harry Kane uu noqdo weeraryahankiisa koowaad ee labada ciyaarood ee Belgium iyo Denmark ay caawa iyo Arbacada la kala ciyaarayaan oo ka tirsan UEFA Nations League.
Laacibkan oo 47 kulan oo uu qarankiisa u saftay u dhaliyey 32 gool ayaa waxa beddelaya Dominic Calvert-Lewin oo hoggaamin doona safka weerarka England kaddib bandhiggii fiicnaa ee uu muujiyey ciyaartii wales, laakiin Tottenham ayaa dhinaceeda ka walaacsan xaaladda laacibkeedan xilli ay kulamo xaasaasi ah kusoo fool leeyihiin.